Fakan-tsary fanaraha-maso amin'ny Shabbat - Raby Michael Avraham
Fakan-tsary fanaraha-maso ny sabotsy
Responsa > Sokajy: Halacha > Fakan-tsary fanaraha-maso ny sabotsy
hazo kesika Nanontany 6 taona lasa izay
Heverinao ve fa voarara ny mandalo eo anoloan'ny fakantsary manaraka ny fifamoivoizana amin'ny sabotsy, na eo anoloan'ny jiro mirehitra amin'ny fifamoivoizana, amin'ny fiheverana fa tsy liana amin'ny fampidinana ny jiro na ny fakantsary aho.
mikyab Staff Namaly 6 taona lasa izay
Raha ny fahalalako dia tsy misy fandrarana izany. Ary maro no efa niatrika izany (ohatra ao amin'ny Shevet Halevi responsa sy ny maro hafa). Jereo ohatra eto:
ו Namaly 6 taona lasa izay
Fanontaniana amin'ny contexte mitovy..
Ahoana ny amin'ny fandehanana amin'ny mpitsikilo feo amin'ny rafitra fanairana rehefa maty ny rafitra?
System off = miasa ny detector ary mampandrenesina fa tsy hampaneno fanairana ny rafitra satria ao anaty mode standby. Ny mpitsikilo dia tsy misy tariby ary tsy afaka mamindra raha tsy misy ny fidirana, ka tsy azo vonoina amin'ny alàlan'ny rafitra izy io fa amin'ny fanesorana bateria fotsiny.
Michi Staff	Namaly 6 taona lasa izay
Inona no mahasamihafa azy? mitovy amin'ny etsy ambony.
ו Namaly 5 taona lasa izay
Raitra fotsiny ny fanontaniana.
Midika izany fa miasa sy mampita ny detector isaky ny mandalo azy ianao, fa ny rafitra fanairana dia tsy mamaly ny émetteur.
Ity dia mpitsikilo napetraka ao an-tranoko ary azoko atao amin'ny fitsipika alohan'ny asabotsy ny manarona ny mpitsikilo / manala ny bateria.
Ny hany mahasamihafa azy dia manana safidy hamahana ny olana aho. Ny fanontaniana dia hoe ilaina ve izany korontana izany.
Michi Staff	Namaly 5 taona lasa izay
Raha mifoha ny mpitsikilo nefa tsy mampita na inona na inona dia tsy misy antony tokony hatahorana. Raha ny hevitro dia tsy misy fandrarana izany. Nanavao ny Rabi Rabinowitz fa rehefa tsy mahita valiny mivantana amin'ny hetsika ianao dia tsy voarara (ho an'ny karatra manokatra varavaran'ny hotely amin'ny Sabata), ary rehefa misy ny vokatra (misokatra ny varavarana) fa tsy mahita ny vokatry ny famindrana. ny karatra. Vaovao ity izay tsy azoko antoka fa ekeko. Saingy eto dia tsy misy vokatra mihitsy (ary tsy hoe tsy mahita izany) ka tsy hitako izay tokony hiharatsy.
Mosesy Namaly 5 taona lasa izay
Heveriko fa amin'ny andro tsy ao an-trano ihany no tokony hamelomana ny detector. Mazava ho azy fa tsy?
Miaraha misoratra anarana 3,095 fanampiny
Ny fihetsehana any an'efitra
Angamba izao no fotoana handinihana ny fitondran-tena?
RAAM sy ny "Takia"
Ny famerenana amin'ny laoniny 'zo' dia hamela trano ara-politika roa ho an'ny aloky ny vahoaka ara-pivavahana nasionaly On Ny fisondrotana sy ny fianjeran'i Bennett sy ny heviny (Tsanganana 486)
sy Elanana On Valiny ho an'ny karazany rehetra.
7 Diovy rehefa tsy ilaina On Valin'ny fahadiovan'ny fianakaviana
Michi On Valiny amin'ny safidy malalaka
Mpianatra Yeshiva On Valiny amin'ny safidy malalaka